News | Tag: sher bahadur deuba
डोटीमा काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सम्मान
धनगढी । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई महेशरामायण सभा (सीताराम माध्यमिक विद्यालय) डोटीले शनिबार गरेको कार्यक्रममा सम्मानित गरेको छ । सभाले आफ्नो हीरक (६०औँ स्थापना दिवस)का अवसरमा गरेको कार्यक्रममा उक्त विद्यालयबाट विसं २०१९ मा प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) उत्तीर्ण गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री देउवालाई सम्मानित गरिएको हो ।
‘देशमा विधिको शासनको अभाव भयो’ : देउवा
धनगढी । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देशमा विधिको शासनको अभाव भएको बताएका छन् । आइतबार नयाँ वर्षको अवसरमा धनगढी जेसिजले आयोजनागरेको हाफ म्याराथनको उद्घाटन गर्दै देउवाले देशमा विधिको शासन खड्केको बताउँदै यसको सञ्चालनका लागि जेसिजले देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।
देउवाले भने– वाइड बडीको छानबिन हुनुपर्छ, एनसेलले कर पनि तिर्नुपर्छ
पोखरा । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वाइड बडीको सम्बन्धमा छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन कास्कीद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले एनसेलले राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने बताए । सभापति देउवाले सरकारले सिके राउतसँग गरेको सम्झौताप्रति आपत्ति जनाए ।
देउवाकाे दाबी : काँग्रेस मात्रै 'प्रजातान्त्रिक समाजवादी' पार्टी
काठमाडौँ । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले काङ्ग्रेस नेपालको एकमात्र प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टी भएको बताएका छन् । इन्टरनेशनल युनियन अफ सोसलिष्ट युथ, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र नेपाल तरुण दलद्वारा संयुक्तरुपमा आज आयोजित युवा सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले भने, ‘काङ्ग्रेस स्थापनाकालदेखि नै नेपालको प्रजातन्त्रका लागि सङ्घर्षरत रहेको पार्टी हो ।’
जिल्ला सभापतिको भेलामा किन गएनन् देउवा ?
काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नुवाकोटको ककनीमा बुधबार सुरु जिल्ला सभापतिको भेलामा अनुपस्थित भएका छन् । देउवाबाटै भेलाको उद्घाटन गर्ने तयारी गरिए पनि अन्तिम समयमा उनी अनुपस्थित भएका हुन्।
सरकारलार्इ देउवाकाे प्रश्न : पत्रकारलाई पक्राउ गर्नेजस्तो काम पनि गर्ने हो ?
काठमाडौं । समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा सरकारले पत्रकारलाई पक्राउ गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आपत्ति जनाएका छन् । प्रहरीले गत सोमबार खोजतलास साप्ताहिकका सम्पादक राजु बस्नेतलाई पक्राउ गरेको घटनाप्रति आपत्ती जनाउँदै देउवाले आफु उक्त पक्राउको विरोधमा रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।